उद्योग मन्त्री नियुक्त गर्दै देउवा, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
उद्योग मन्त्री नियुक्त गर्दै देउवा, को हुन् उनि ?
काठमाडौँ। उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र हानथाप चलिरहेको छ। काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले नै उद्योग मन्त्रालय दाबी गरेका छन्।
एक मन्त्रालयमा चार पार्टीको दाबीपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सकसमा छन्। रक्षा मन्त्रालय आफैंसँगै राख्ने मुडमा रहेका देउवाले गठबन्धनभित्रको हानथापका कारण उद्योग मन्त्रालयमा समेत मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको बुझिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार चार पार्टीले एक मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि उद्योग मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुने पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग नाम जोडिएपछि असोज २२ मा मन्त्री भएका गजेन्द्र हमालले असोज २४ गते राजीनामा दिँदा उद्योग मन्त्रालय मन्त्री विहीन छ।
यद्यपि हमालको राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हाल्दै आएका छन्। यस्तै काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा नराम्रो पराजय भोगेपछि मिनेन्द्र रिजालले पनि रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हालेको अवस्था छ। रिक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लिन सत्तारूढ दलहरूबीच हानथाप चलेको छ।
काँग्रेसको कोटाबाटै हमाल मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि उक्त मन्त्रालयमा दाबी छ। तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने उक्त मन्त्रालय काँग्रेसकै भागमा राख्न लागिपरेका छन्।
देउवाले राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई उद्योगमन्त्री बनाउने चर्चा छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने तेजुलाल चौधरीको नाम देउवा समक्ष राखेका छन्। पौडेल असोज २२ मै चौधरीलाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिए।
तर देउवाले दिलेन्द्र बडू र मिनेन्द्र रिजाल रोजेपछि चौधरी मन्त्री बन्नबाट बन्चित भएका थिए। यता माओवादीले सत्ता घटकको दोस्रो ठूलो दलका हिसाबले संख्यात्मक हिसाब मिल्ने भन्दै उद्योग मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि उद्योगमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। गठबन्धनको सरकार बन्द सबै पार्टीले समान संख्यामा मन्त्रालय दिने सहमति विपरीत असोज २२ मा सरकारले पूर्णता पाएको उनीहरुको तर्क छ।
पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री देउवाको सहजताका लागि समान संख्यामा मन्त्रालय पाउने अडानबाट ब्याक भएको उनीहरुको भनाइ छ। अब प्रधानमन्त्री देउवाले उदारता देखाउनुपर्ने माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरु बताउँछन्।
तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माओवादी एक्लै चुनाव लड्न सक्षम रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीसँग विचार र एजेण्डा भएको भन्दै एक्लै चुनाव लड्न सक्षम भएको दाबी गरे।
उनले काँग्रेस-एमाले एजेण्डा र विचारमा शून्य रहेको बताउँदै अहिले आफुहरुलाई अपमानित गर्ने काम भएको समेत बताए। बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हामीभन्दा काँग्रेस १० सिट तल हो। त्यही पाटीलाई उचालेर सिंहासनमा लगेर राखिएको छ, अहिले उसैले हामीलाई अपमानित गर्ने ? यस्तो अपमान सहन सकिन्न।
तेस्तै, नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई काँग्रेसको प्रभाव बढ्दै गएको महसुस हुन थालेको बताएका छन्। पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महतले ओली आत्तिएर एमालेविरुद्ध षड्यन्त्र भयो भन्न थालेको बताएका हुन्।
नेपाली काँग्रेसले आगामी फागुन २९ गतेदेखि चैत २९ गतेसम्म घर घर जाऔँ, नेपाली काँग्रेस जिताऔँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्दैछ। सोही अभियानबारे जानकारी दिन काँग्रेसले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो।
अभियानबारे जानकारी दिँदै महतले पार्टीले सबै कार्यकर्तालाई स्थानीय निर्वाचनको अभियानमा जिम्मेवारी दिने बताए । उनले चुनावमा गठबन्धन हुने/नहुनेबारे अहिले नै बहस गर्न आवश्यक नभएको पनि बताए।
सो कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले चुनावी गठबन्धनबारे काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन र केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय लिने बताए । ‘अहिले हामी गठबन्धनबारे कुनै बहस गर्दैनौँ।
काँग्रेसले एक ढिक्का भएर गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छ, उनले भने, गठबन्धनबारे को नेताले के बोले भन्ने विषयमा चर्चा गर्न आवश्यक छैन । काँग्रेसले संस्थागत निर्णय निर्णय गरेर मात्र यसबारे बोल्छ।
उनले केही दिनमा नै भंग गरिएका भातृ संस्थाको नयाँ कमिटी चयन हुने पनि जानकारी दिए। यता महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली काँग्रेस जनतालाई आफ्नो कुरा सुनाउन मात्र नभएर जनताको कुरा सुन्न पनि घर–घरमा जाने बताए।
उनले भने, काँग्रेस जनतासँग मत माग्न मात्र जाँदै छैन, निर्वाचनमा भाग लिन अभिप्रेरित गर्ने छ। काँग्रेससँग कसैले आत्तिनु पर्दैन। काँग्रेस मर्यादित रूपमा चुनावी अभियानमा जाँदै छ।